MA GIL-GILO DUQAYTIDA NINKII AW KA SOO GO’AY (jawaab celin SPR)
Axmed Guushaa Cali | E-mail: guushaa2003@yahoo.com
Bilaash xaytayaal uu wax tarkoodu ku soo ururay inay cid uun aflagaadeeyaan ayaa ayaamahan caadaystey inay qoraallo aan wax dheef ah ummadda Soomaaliyeed u lahayn ku qoraan boggaga Internet’ka. Taas oo liddi ku ah geeddi socodka iyo midaynta bulsho weynta Soomaaliyeed ee kala irdhowdey. Ujeedadooduna waxa weeye inay tuhun iyo shaki kala geshaan shacabka iyo madaxda Soomaaliyeed ee ku hawlan soo celinta iyo xal u helidda qarankii Soomaaliyeed ee bur-buray.
Waxaa la yaab leh kuwa sameeya ama qora qoraalada huwan dacaayadaha raqiiska ah ee ay sida khaladka ah isaga dhaadhiciyaan inay wax ugu dhimi karaan masuul sare oo Soomaaliyeed. Todobaadkii la soo dhaafay iyo kuwa ka horeeyey ayuu shaqsi magaciisa qariyey oo ku hadlayey magaca ururka aan la aqoon ee SPR, wuxuu faafiyey qoraal uu ugu magac daray: “TARAB TARAB U DILE DOORASHO MA LEEYAHAY” iyo kuwo kale oo aan in la xuso ku fiicnayn.
Shaqsigaasi qoraalkiisa wuxuu ku saleeyey caadifad aan cilmi ku dhisnayn iyo wax ka sheeg qof anba ogayn. “AF CAWO NINKIISUU DHIBAA”. Waxaa wanaagsanyd ninka cay iyo hadaaq dhallaan dan moodey inuu sal muggii u fadhiisto oo ka gaabsado isku dhererinta cid uusan abidkii gaadhayn. “ WAXAAD IIGA DABA QAYLISAA DACAW SIDIISII”.
Qoraal kasoo baxay SPR oo jawaab u ahaa qoraalkii.... GUJI... July 9
Nin geesigii Seyid Maxamed Cabdulle Xasan aad u nebcaa oo inuu waxyeello u gaysto awood u waayey ayaa ku riyooday isagoo Seyid Maxamed wadnaha hooto kala helay, farxaddii buu soo baraarugey mise gabaahiir cidlo ah ayuu jiifaa, markaasuu Seyidka u tiriyey tix ay kuwani ka mid ahaayeen:
Hootadaan Gol-dheer iyo ka ridey Xanano guudkooda
Wadaadkii sidee uga gabaday waa gol madhantiiye.
Seyid Maxamed oo la yaabban riyada foosha xun ee ninkaas iyo macno daradiisa ayaa tixdan gaaban ugu jawaabay:
Ee yidhi baddaa Garacad baan gudub u weeydaarshey
Godka lagu cadaabyoow muxuu go’uhu baan sheegay!.
Taas waxaa ka dhigan naakhuudaha lama yaqaan SPR oo iyagu caadaystey wax ka sheegga madaxweyne C/llaahi Yuusuf iyo masuuliyiinta kale ee Soomaaliyeed. Waxaan qoraalkaygan ku soo gunaanadayaa murtida soomaaliyeed ee oranaysa:
Gudo baas mid laga keenayoo garaca mooyaane,
Ma gilgilo duqaytida ninkii Aw ka soo go’aye.
Axmed Guushaa Cali
Faafin: SomaliTalk.com | July 20, 2003